Ny toby famaranana miaraka amina charger dia ho zava-misy | Vaovao IPhone
Apple dia hamela ireo mpanamboatra hampiditra charger ao amin'ny dock Apple Watch
Iray amin'ireo olana lehibe atrehin'ireo mpanamboatra fitaovana ho an'ny iPhone, iPad ary iPod Nandritra ny fotoana lava izao, io dia ny fanamarinana napetrak'i Apple amin'ny fitaovana fampidinana azy, izay ny mari-pankasitrahana ihany no afaka miantoka ny fifanarahana tsy misy risika XNUMX% rehefa mameno ny fitaovantsika.
Ity dia naseho indray ny patanty miaraka amin'ny isan'ny toby famahanana izay aparitaka eny an-tsena ho toy ny kojakoja ho an'ny Apple Watch, vokatra iray izay dia manao ampihimamba ampahany tsara amin'ny mpanamboatra ny an'ity karazana fanampiana ity izay manamora ny andavan'andro ataontsika amin'ny famataran-telefaona rehefa mandoa azy io. Na izany aza, somary tsy mahazo aina ihany ny mila mandehandeha manaparitaka ny charger izay miaraka amin'ny volo ao anaty fotony ary esory avy eo raha te-hitondra azy miaraka amintsika isika na handidy izany any an-kafa.
Apple te hanova an'io, noho izany dia nanavao ny politikan'ny programa izy MFi (Natao ho an'ny iPhone / iPad / iPod) ho an'ny mpanamboatra ireo kojakoja ireo afaka mampiditra charger amin'ny toerany mivantana. Ny charger voalaza dia homen'ny mpamatsy mahazatra ny orinasa ary ho an'ny tanjona rehetra, toy ny charger tany am-boalohany izay tafiditra rehefa mividy ny vokatra.
Mbola misy volana vitsivitsy hananganana azy io ho toy ny fenitra ary afaka manomboka mamokatra ny toby famahanana sy ny kojakoja hafa miaraka amina charger ireo mpanamboatra, saingy dingana iray tena lehibe izy io izay mety hifanaraka kokoa amin'ny fahatongavan'ny WatchOS 2 amin'ny volana septambra, izay antenaina fisondrotana amin'ny varotra Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Apple dia hamela ireo mpanamboatra hampiditra charger ao amin'ny dock Apple Watch
XaviCo dia hoy izy:
Inona ilay dock hita eo amin'ny sary. Hividy azy aho. Azonao atao ve ny milaza amiko manao / maodely?
Mamaly an'i XaviCo
Manatevin-daharana ny fangatahan'ny mpiara-miasa aho, tiako izany dock izany
TodoMovies 4, ny sarimihetsikao amin'ny iPhone sy Apple Watch